Ferrule, hydraulic mety tsara, Sodina mety tsara, Split Flange, hydraulic Hose mety tsara - Kangdi
Ferrule Fa Teflon Hose
Hose mety tsara
Interlock Hose mety tsara
Reuseable Hose mety tsara
Sockeless Hose mety tsara
Mety tsara miray Hose
Mimetatra Thread hihinana Type Tube mety tsara
BSP Thread 60 ° mety tsara
BSPT Thread mety tsara
JIC 74 ° Cone nirehitra Tube mety tsara
Wire randrana Hose
Wire miolakolaka Hose
Ployseter roa randrana Hose
lorem: ip vola
Ningbo KangDi hydraulics Co., dia mpiray barotra amin'ny kapitaly manan-karena. Ny orinasa fanamboarana mora specializes amin'ny avo-tsindry sodina tonon-taolana izay miely any an-toerana sy ny fanondranana any Frantsa, Italia, Azia Atsimo Atsinanana sy Hong Kong.
Ny orinasa mampiasa UNIFLEX sebific duct burking milina sy kofehy milina fanasitranana avy any Alemaina sy ny CNC milina, multi-mpiray milina mandeha ho azy, turret lathes ary koa kofehy-roller eo amin'ny famokarana. Ny vokatra isan-karazany ahitana sebific duct tonon-taolana, karatra-fonony karazana sodina vy tonon-taolana, Malagasy-English fitsipika tetezamita tonon-taolana ary koa ny mpiray tanteraka sebific duct milentika, izay penitra ny ISO9001: 2000.
Talohan'ny mpitarika ambony
Ningbo Kangdi hydraulic Co., Ltd. dia mifanakaiky amin'ny Toerana mahafinaritra Dongqian Lake Toerana mahafinaritra Area, nandrakotra ny faritra mihoatra ny 6.000 ㎡. Tsy tia toerana tsara tarehy voajanahary tsara tarehy, mety tsara fitaterana sy ny toerana jeografika, satria 15 kilaometatra avy any Ningbo seranam-piaramanidina iraisam-pirenena, ary latsaka ny 20 km avy any Beilun Port. Izy io dia an-trano manokana mpanamboatra ny hydraulic sodina Fittings amin'ny efa ho folo taona famokarana traikefa.
Ny orinasa fandidiana tafiditra amin'ny sehatra samihafa rehetra ny faritra hydraulic rafitra, izay ahitana hydraulic hoses, Hose Fittings, adapters, hydraulic solenoid valves, ary dehibe tombo-kase faritra fitaovana isan-karazany, ny tsindry sy ny lafiny haavon'ny fenitra. Ny vokatra dia ampiasaina ao amin'ny hydraulic rafitra fampitana sy ny ranon ao amin'ny metallurgical milina, solika, fitrandrahana harena ankibon'ny tany, fanorenana simika, fambolena, lamba, an-dranomasina fanaka, aerospace, miaramila, elektronika fialam-boly, fanafody, sy ny sakafo orinasa.
1CM-WD-mimetatra Thread hihinana Type Tube mety tsara
AD mimetatra Thread hihinana Type Tube mety tsara